भागरथी भट्टलाई बलात्कार र हत्या गरेको आरोपितलाई किन दिइएइन जेल सजाय ? – Khabar Patrika Np
भागरथी भट्टलाई बलात्कार र हत्या गरेको आरोपितलाई किन दिइएइन जेल सजाय ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, फाल्गुण २६, २०७७ समय: १२:२२:५५
बैतडी, २६ फागुन ।कि’शोरी ब’लात्का’र र ह’त्या गरेको आ’रोप लागेका बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका–७ चडेपानीका १६ वर्षीय दिनेश भट्टलाई पु’र्पक्षका लागि सु’धारगृ’ह पठाउन जिल्ला अ’दालत बैतडीले आदेश दिएको छ ।
दिनेशमाथि सोही गाउँकी १७ वर्षीया भा’ग:रथी भट्टलाई ब’लात्का’र र ह’त्या गरेको आ’रोप लागेको हो ।
दिनेशलाई सरकारी वकिल कार्यालयले मङ्गलबार अ’दालत बुझाएको थियो । अदा’लतले दिनेशलाई १८ वर्ष नपुगेकाले पु’र्पक्षका लागि सुधारगृह पठाउन आ’देश दिएको बैतडीका प्रहरी प्रमुख, प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायणप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
थुनछेक बह,सपछि जिल्ला अदा,लतका न्या,याधीश तिलकबहादुर कार्कीको इजलासले पुर्पक्षका लागि सु,धारगृ,ह पठाउन आदेश दिएको हो
दिनेशलाई बुधबार डोटीमा रहेको सु’धारगृ’ह पठाउने तयारी रहेको गरिएको छ । गत माघ २१ गते विद्यालयबाट फर्किएकी भाग”रथी साँ’झ घर नपुगेपछि खो’जतला”स गर्दै जाँदा माघ २२ गते स्थानीय लवलेक जङ्ग”लमा वि”भत्स र नि”र्वस्त्र अवस्थामा मृ”त फेला परेकी थिइन् ।